LX1 Bias Mheni CRI 95 6500K Yakagadzirwa D65 Yakachena Bias Mwenje - MediaLight Bias Mwenje
musha LX1 Bias Mheni CRI 95 6500K Yakagadzirwa D65 Yakachena Bias Mwenje
LX1 Bias Mheni CRI 95 6500K Yakagadzirwa D65 Yakachena Bias Mwenje
Mutengo wepakutanga $24.95
Mutengo wepakutanga $24.95 - Mutengo wepakutanga $58.90
Mutengo wanhasi $24.95
product.variants.choose_variant Yakawedzera Diki (1 Mita) / Kwete dimmer - $ 14.95 Yakawedzera Diki (1 Mita) / Bhatani dimmer (+ $ 4.95) - $ 19.90 Yakawedzera Diki (1 Mita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 21.90 Yakawedzera Diki (1 Mita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 23.90 Diki (2 Mamita) / Hapana dimmer - $ 19.95 Diki (2 Mamita) / Bhatani dimmer (+ $ 4.95) - $ 24.90 Diki (2 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 26.90 Diki (2 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 28.90 Pakati (3 Mamita) / Kwete dimmer - $ 24.95 Pakati (3 Mamita) / Bhatani dimmer (+ $ 4.95) - $ 29.90 Pakati (3 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 31.90 Pakati (3 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 33.90 Yakakura (4 Mamita) / Kwete dimmer - $ 29.95 Yakakura (4 Mamita) / Bhatani rakadzika (+ $ 4.95) - $ 34.90 Yakakura (4 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 36.90 Yakakura (4 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 38.90 Yakawedzera Yakakura (5 Mamita) / Kwete dimmer - $ 34.95 Yakawedzera Yakakura (5 Mamita) / Bhatani rakadzima (+ $ 4.95) - $ 39.90 Yakawedzera Yakakura (5 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 41.90 Yakawedzera Yakakura (5 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 43.90 Yakawedzera Yakakura (6 Mamita) / Kwete dimmer - $ 39.95 Yakawedzera Yakakura (6 Mamita) / Bhatani dimmer (+ $ 4.95) - $ 44.90 Yakawedzera Yakakura (6 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95) - $ 46.90 Yakawedzera Yakakura (6 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) - $ 48.90
Yakawedzera Diki (1 Mita) Diki (2 Mamita) Pakati (3 Mamita) Makuru (4 Mamita) Yakawedzera Huru (5 Mamita) Yakawedzera Yakakura (6 Mamita) urefu
Hapana dimmer Bhatani dimmer (+ $ 4.95) Infrared kure kudzora dimmer (+6.95) ZvemagetsiHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95) Dimmer Rudzi
Wanga uchitsvaga referensi yemhando yemwenje isingapaze bhangi.
Kuunza LX1 kubva kune vanogadzira Iyo MediaLight.
Isu tinoziva kushungurudzika kunogona kuita kuwana inokwanisika, yemhando yepamusoro kukoshesa mwenje. Ndosaka takagadzira LX1 Bias Lighting - mwenje wakasarudzika wakaringana pamutengo unodhura. Inokunda ese ega emakwikwi edu uye inodhura zvishoma.
Chikamu chakanakisa ndechekuti haufanire kupira mhando kuti uwane mari. Nekuita shanduko dzakapfava mukutsanangudza kune yedu inomira midhiya yeMediaLight kukoshesa mwenje, isu takakwanisa kugadzira mwenje wepamusoro-soro unodarika mwero wemaindasitiri.
MediaLight yakave indasitiri chiyero chevashandi vepasirese, chinoshandiswa mune yega studio mune nhepfenyuro uye firimu, uye kuvimbwa nevarairidzi pakururamisa kwedu kwakanyanya - asi hatina kumbopaza musika wemba yemitambo nekuda kwemutengo wakakwira weMediaLight. Kusvika ikozvino.
Iye zvino unogona kuona zvazvinonzwa kuita kuve nemagetsi-giredhi mwenje iwe wega mumba yekutandarira. Uine LX1 Bias Lighting, iwe unozogona kuwona mafirimu ane chaiwo mavara sezvaakange akafanirwa nemutungamiriri. Iwe zvakare unokwanisa kunakidzwa neakanyanya echisikigo toni toni kana uchiona TV kana kuratidzira mavhidhiyo Uye kana iwe uri mukutamba? Iwe hautende kuti mitambo irinani inotaridzika sei neLX1 yakaiswa.
Tora yako nhasi. Maziso ako achakutenda.
Ndiri kufunga kuti zvimiro izvi zvinofananidzwa sei neMediaLight uye mamwe mwenje wekusarura? Dzvanya apa kuti uenzanise!
• 6500K (ISF-yakasimbiswa kuti yakarurama)
• Ruvara rwekupa indekisi (CRI) 95
Inobatanidza kuburikidza neUSB 3.0 kune yako TV (ipfupi kureba kubva 1m-4m shanda ne USB 2.0)
• USB neDC zvinongedzo zvekubatanidza zvisina muganho uye sarudzo dzevatongi
• Inosanganisira 15 inches yemagetsi tambo. (Kana chiteshi chako cheUSB chiri kure nemucheto, ungangoda tambo yekuwedzera. Tinopa yakawedzerwa 0.5m yekuwedzera ye $ 7.95. Imwe inosanganisirwa pasina muripo neMediaLight Mk2 Flex yedu)
• Batanidza iyo LX1 nedhimoni (inotengeswa zvakasiyana), kuti igadzire yakakwana bias mwenje sisitimu
5.0 Kubva pane 117 Ongororo
Easy install. Akatenga maviri.
Pakati (3 Mamita) / MagicHome WiFi Dimmer (+ $ 8.95)
Iyo yakanakisa kambani kubata nayo
Ndakazonowira mugomba retsuro ndichitsvagurudza maTV, zvakandisvitsa parusarura mwenje, izvo zvakandisvitsa pano. Ini ndakatanga ndisina chokwadi chekuti ndaizoda kuvhenekerwa kwakarerekera here kana kuti kwete, ndakafunga kuti ndingazviedzawo, zvino handifunge kuti ndaizokwanisa kuona TV pasina rusaruro. Mhinduro yebasa revatengi zvakare inokurumidza zvinoshamisa mune yangu ruzivo, izvo zvisingawanzo kuwanikwa nemakambani mazuva ano.
Inotaridzika chaizvo. Yakanatsiridza chaizvo bhaisikopo rangu rekuona ruzivo uye yakazara theatre aesthetic muimba yangu yekutandarira. Uye handikwanise kutaura zvakakwana nezve kunaka kwaJason nechikwata mukuona kuti unowana zvakanyanya kubva kune zvigadzirwa zvavo. Yepamusoro notch sevhisi uye kuda kune ino kambani kune ramangwana rekuwedzera.
Yakakura (4 Mamita) / Bhatani dimmer (+ $ 4.95)
Ndakatenga 4 metres LX1 light kit ine dimmer uye remote. Ndakatarisa vhidhiyo yekuisa pamberi saka iyo yekuisa yakafamba zvakanaka. Ndaive nekanyaya kadiki saka ndakatumira email kukambani pakupera kwesvondo ndichitarisira kuti ndaizonzwa kubva kwavari neMuvhuro. Chakandishamisa ndechekuti muinbox maiva nemhinduro musi weMugovera mangwanani. Vakanditumira remote yeupgraded ndokubhadhara nhumbi. Iyo sisitimu inoshanda zvakakwana; Ndaisagona kufara.
Yakakura (4 Mamita) / Infrared remote control dimmer (+ 6.95)
Chigadzirwa chakanakisa, kunyange nani basa revatengi!
Iyo LX1 Bias Chiedza pachayo yakanaka. Kuiswa kwakakurumidza uye kuri nyore uye Wi-Fi adapta ndiyo kiyi yekuibatidza nekudzima. Ndinokurudzira chigadzirwa kune chero munhu. Zvakatove nani yaive service yevatengi yakapihwa naJason. Ini handina kuferefeta chigadzirwa zvakakwana pakutanga uye handina kuwedzera Wi-Fi adapta pandakatanga kutenga Bias Chiedza. Ndakatumira Jason email zuva raitevera, akapindura mukati meMINUTES, uye akawedzera adapta kuodha yangu ipapo ipapo. Zvese zvakasangana zuva kana maviri mushure meizvozvo. Fantastic customer service!
Yakawedzera Huru (5 Mamita) / Hapana dimmer